Napoli oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Kooxda Liverpool ka gudbisay Daafaca Kalidou Koulibaly – Gool FM
Napoli oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Kooxda Liverpool ka gudbisay Daafaca Kalidou Koulibaly
Haaruun June 22, 2020
(Naples) 22 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Napoli ee Waddanka Talyaaniga ayaa ka soo jawaabtay dalabkii ugu horreeyey oo ay Liverpool ka soo gudbisay Kalidou Koulibaly.
Napoli ayaa soo diiday sida wararku ay tilmaamayaan dalab 58 milyan oo gini ahaa oo ay Kooxda Liverpool ka soo gudbisay Kalidou Koulibaly.
Warsidaha Talyaaniga ka soo baxa ee Corriere Dello Sport ayaa warinaya in la soo diiday dalabadkii furitaanka ahaa ee ay Liverpool ka gudbisay daafaca dhexe Napoli ee Kalidou Koulibaly, kaasoo ku kacayey 58 milyan oo gini.
Manchester United ayaa sidoo kale la la xiriiriyay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Senegal, laakiin kooxda reer Talyaani ayaa ugu yaraan ku doonaysa 90 milyan oo gini oo u dhiganta 111 milyan oo doollar.
Kooxda Liverpool waa inay hurtaa lacag aad u badan haddii ay rabaan Koulibaly inuu daafaca dhexe kala garab ciyaaro Virgil van Dijk xilli ciyaareedka soo socda.
Xiddigii hore ee Manchester United, Morgan Schneiderlin oo Tijaabada caafimaad u maray Koox cusub
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda Barcelona uga qeyb galaya Kulanka Athletic Bilbao oo lagu dhawaaqay… (MSG oo hoggaaminaya & Xiddigo muhiim ah oo maqan)